မူဆလင်များမှ ခရစ်ယာန်တစ်ဦးအား ယေရှုခရစ်တော်အား စွန့်ပစ်စေ၍ မိုဟာမက်အား တမန်တော်အဖြစ် အဓမ္မအသိအမှတ်ပြုခိုင်းပြီးနောက် ခေါင်းဖြတ်သတ်ပစ် | မျိုးမြန်မာ
မူဆလင်များမှ ခရစ်ယာန်တစ်ဦးအား ယေရှုခရစ်တော်အား စွန့်ပစ်စေ၍ မိုဟာမက်အား တမန်တော်အဖြစ် အဓမ္မအသိအမှတ်ပြုခိုင်းပြီးနောက် ခေါင်းဖြတ်သတ်ပစ်
Posted by myomyanmar on August 6, 2014
Posted in: သတင်း.	Tagged: မွတ်စလင်, အစ္စလမ်ဘာသာ, အစ္စလာမ်ဘာသာဆိုသည်မှာ, ခေါင်းဖြတ်သတ်.	Leaveacomment
ဆီးရီးယားနိုင်ငံတွင် အစ္စလမ္မစ် စစ်သွေးကြွများက ခရစ်ယာန်တစ်ဦးအား ၎င်း၏အယူဝါဒကို စွန့်လွှတ်ခိုင်းပြီး မိုဟာမက်အား တမန်တော်ဟူ၍ သတ်မှတ်ကာ ဦးညွှတ်ရန် အဓမ္မခိုင်းစေခဲ့သည်။ ထို့နောက်တွင် ထိုသူကို ခေါင်းဖြတ်သတ်ပစ်လိုက်သည်။
ထို့ပြင် တစ်ကမ္ဘာလုံးရှိလူများအား ထိုသူ၏ အဖြစ်ကို နမူနာပြကာ ခြိမ်းခြောက်သည့်အနေဖြင့် ထိုအဖြစ်အပျက်ကို ဗွီဒီယိုမှတ်တမ်းတင်ကာ ထုတ်လွှင့်ပြသခဲ့သည်။
You Tube တွင် တင်ထားသော ထိုဗွီဒီယို၌ ဘာသာပြန်စာတမ်းပါ ထိုးထားသည်။
ထိုဗွီဒီယို၌ ခရစ်ယာန်တစ်ယောက်ကို မျက်နှာဖုံးစွပ်ထားသော လက်နက်ကိုင် စစ်သွေးကြွများက ဝိုင်းထားသည်။ ခရစ်ယာန်မှ စစ်သွေးကြွများတိုင်ပေးသည့်အတိုင်း လိုက်ရွတ်နေရသည်။ “အလ္လာဟ်သည် တစ်ဆူတည်းသော ဘုရားဖြစ်သည်…. မိုဟာမက်သည် တမန်တော် ဖြစ်ကြောင်း ကျွန်တော်သက်သေခံပါသည်”
ထို့နောက် စစ်သွေးကြွအဖွဲ့မှ ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ဟန်တူသူက ၎င်း၏လူများကို ပြောသည်။
“ဟေ့…. ဒီကောင်ကို ဘယ်သူကမှ ပစ်မသတ်ရဘူး.. နားလည်လား? ဒီကောင့်ကို သနားညှာတာသောအားဖြင့် ပစ်မသတ်ဘူး….
အေး ဒီကောင့်ကို ခေါင်းဖြတ်ပြီးပဲ သတ်မယ်…. ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ဒီကောင်က ကာဖိရ်… အစိုးရဘက်ကလူ…. အလ္လာဟ်ကို ရှိမခိုးတဲ့သူ….. ဒီကောင်ကို ထောက်ခံလျှင် ဒီကောင်လိုပဲ ခေါင်းဖြတ်ခံရပြီး သေမယ်ဆိုတာ မှတ်ထားပါ”
ဓားကိုင်ထားသော စစ်သွေးကြွတစ်ယောက်မှ ထိုခရစ်ယာန်၏ ဆံပင်မွှေးများကို စုကိုင်ပြီး စတင်ခေါင်းဖြတ်သည်။ ခေါင်းဖြတ်နေစဉ် လူအုပ်မှ “အလာဟူ အကဘာ…… အလ္လာဟ်သာလျှင် တစ်ဆူတည်းသော ဘုရား” ဟူ၍ အော်ဟစ်ကြသည်။
[ဗွီဒီယို ကြည့်ရှုရန် ဤYou Tube link ကို click ပါ: https://m.youtube.com/watch?v=rTisrEIv1H0&has_verified=1&oref=https%3A%2F%2Fm.youtube.com%2F%3Fclient%3Dmv-google&layout=mobile&client=mv-google]
၂၀၁၄ ခုနှစ် ကုလသမဂ္ဂ၏ နိုင်ငံတကာ ဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့် အစီရင်ခံစာအရ ဆီးရီးယားသည် အခြားသော မူဆလင်နိုင်ငံများကဲ့သို့ပင် အစွန်းရောက်မူဆလင်များ နှင့် အကြမ်းဖက်သမားများရန်ကြောင့် ခရစ်ယာန်များအတွက် အလွန်အန္တရာယ်ကြီးသော နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ ဖြစ်သည်။
← Ooredoo SIM Card Blocker APK
မွတ်ဆလင်ကုလား မဒိမ်းသမားလက်မှ လွတ်မြောက်ခဲ့တဲ့(၁၀)ကျောင်းသူမအေးမြတ်သ →